ကိုဆွေဝင်းကို ခြိမ်းခြောက်ရန်ပြုသူများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ကိုဆွေဝင်းကို ခြိမ်းခြောက်ရန်ပြုသူများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ
ကိုဆွေဝင်းကို ခြိမ်းခြောက်ရန်ပြုသူများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ
Apann Pyay 7:38 AM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်အမှုနဲ့လူသိများလာတဲ့ Myanmar Now သတင်းထောက် ကိုဆွေဝင်းကို မတ်လ ၁၄ ရက် ည ၉ နာရီလောက်မှာ ရန်ပြုခံခဲ့ရတယ်လို့ ၄င်းရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ယခုလိုပဲ တင်ထားပါတယ်။
မတ်လ ၁၄ ရက်ညနေပိုင်း ၉ နာရီလောက် အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး စကော့မာရှယ်က ညစာဖိတ်ကျွေးလို့ သူ.အိမ်ကအပြန် ဗဟိုလမ်းနဲ. မြောင်းမြလမ်းထိပ်မှာ ကျနော့်ကုိုဆွေဝင်းလားလို့မေးပြီး ထိုးကြိတ်ဖို့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးပြောဆိုခြိမ်းခြောက်တာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီထဲကလူတစ်ချို.က စမ်းချောင်းဖျာပုံလမ်းမှာနေတယ်လို့ အခင်းဖြစ်ရာနားမှာရှိတဲ့ လူတစ်ဦးက ပြောတာကို ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေကိုပြောပြလိုက်လို့ ဒီလူ ၃ ဦးလုံးဟာ ဗဟိုလမ်းနဲ.ဖျာပုံလမ်းထောင့်က Gold ဘီယာဆုိုင်မှာ ညနေ ၄ နာရီထဲက ဘီယာသောက်နေတယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက CCTV မှတ်တမ်းတွေဖွင့်ပြတော့ ကျနော့်ကိုခြိမ်းခြောက်တဲ့ လူ ၃ ဦးလုံးရဲ.ရုပ်ပုံတွေကိုရှာဖွေတွေ.ရှိပါတယ်။
ဒီ ၃ ဦးထဲက တစ်ဦးက စမ်းချောင်းဖျာပုံလမ်း အိမ်အမှတ် ၃၄/ ၅ လွှာမှာနေတဲ့ ထွန်းထွန်းဇော် (ဘ) ဦးထွန်းရီ (ရှပ်အင်္ကျီအနီနဲ့အောက်ပါပုံ) ဖြစ်ကြောင်းသိရလို့ရဲတပ်ဖွဲ.က သွားရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အခါ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ နက်ဖန်မနက် ၁၀ နာရီမှာ စမ်းချောင်းတရားရုံးမှာ ဦးတိုက်လျှောက်ရပါမယ်။ ဘာမှမဖြစ်သွားပေမယ့် အလားတူဖြစ်စဉ်တွေမပေါ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ သက်ဆိုင်သူများ ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူပေး၇န် လျှောက်ထားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးကိုတင်မယ့်စာတွေကို အောက်မှာ တင်ထားပါတယ်။
credit to ကိုဆွေဝင်းဖေ့ဘုတ် Ba Kaung
မတျလ ၁၄ ရကျညနပေိုငျး ၉ နာရီလောကျ အမရေိကနျသံအမတျကွီး စကော့မာရှယျက ညစာဖိတျကြှေးလို့ သူ.အိမျကအပွနျ ဗဟိုလမျးနဲ. မွောငျးမွလမျးထိပျမှာ ကနြေျာ့ကိုဆှဝေငျးလားလို့မေးပွီး ထိုးကွိတျဖို့လကျသီးလကျမောငျးတနျးပွီးပွောဆိုခွိမျးခွောကျတာရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ ဒီထဲကလူတဈခြို.က စမျးခြောငျးဖြာပုံလမျးမှာနတေယျလို့ အခငျးဖွဈရာနားမှာရှိတဲ့ လူတဈဦးက ပွောတာကို ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှုးတှကေိုပွောပွလိုကျလို့ ဒီလူ ၃ ဦးလုံးဟာ ဗဟိုလမျးနဲ.ဖြာပုံလမျးထောငျ့က Gold ဘီယာဆိုငျမှာ ညနေ ၄ နာရီထဲက ဘီယာသောကျနတေယျဆိုတာသိရတာနဲ့ ဆိုငျပိုငျရှငျတှကေ CCTV မှတျတမျးတှဖှေငျ့ပွတော့ ကနြေျာ့ကိုခွိမျးခွောကျတဲ့ လူ ၃ ဦးလုံးရဲ.ရုပျပုံတှကေိုရှာဖှတှေေ.ရှိပါတယျ။ ဒီ ၃ ဦးထဲက တဈဦးက စမျးခြောငျးဖြာပုံလမျး အိမျအမှတျ ၃၄/ ၅ လှာမှာနတေဲ့ ထှနျးထှနျးဇျော (ဘ) ဦးထှနျးရီ (ရှပျအကငြ်္ီအနီနဲ့အောကျပါပုံ) ဖွဈကွောငျးသိရလို့ရဲတပျဖှဲ.က သှားရောကျဖမျးဆီးတဲ့အခါ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျသှားပွီဖွဈပါတယျ။ နကျဖနျမနကျ ၁၀ နာရီမှာ စမျးခြောငျးတရားရုံးမှာ ဦးတိုကျလြှောကျရပါမယျ။ ဘာမှမဖွဈသှားပမေယျ့ အလားတူဖွဈစဉျတှမေပျေါခငျ ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ သကျဆိုငျသူမြား ဥပဒကွေောငျးအရ အရေးယူပေး၇နျ လြှောကျထားသှားမှာဖွဈပါတယျ။တရားရုံးကိုတငျမယျ့စာတှကေို အောကျမှာ တငျထားပါတယျ။